Shiinaha 38 mitir laba-wershadood oo warshadda gawaarida qaada ee buundada iyo iibiyaasha | Changyuan
38m Laba-buundo ah bam-gacmeed isku-dhafka ah, oo sidoo kale loo yaqaan bambo-boombo, matoor nooca yar-yar ah, gaar ahaan loo isticmaalo magaalooyinka yaryar iyo horumarinta suuqyada miyiga, isku-darka isku-dhafka hal, ayaa ah isku-dhafka baabuurta, nidaamka korantada, nidaamka isku-qasidda qasabka ah, nidaamka bamgareynta iyo gogosha cududda mid ka mid ah xarunta mobilada isku-dhafka ah ee micro micro, waxay si weyn u keydisaa qiimaha shaqada iyo wanaajinta waxqabadka dhismaha. waa mid mobiil badan oo dabacsan, ku habboon oo wax ku ool ah.
Shirkadeena waa warshadaha culus ee warshadaha culus ee Topworld waxayna ku tiirsan tahay waxsoosaarkooda adag iyo awooda waxsoosaarka ee soosaarka alaabada teknolojiyada, waxay leedahay astaan ​​heer sare ah, shaqo buuxda, wax qabad wanaagsan, iyo sidaa darteed faa iidooyinka dhameystiran ee aadka u badan.
1. Iyada oo la raacayo astaamaha jidadka miyiga dooro noocyada caanka ah ee Dongfeng wadanka IV chassis, cabbirka gawaarida 2.5 mitir, naqshad culeyskeedu culus yahay, kor u qaadista cabbirka gawaarida si ay ula kulmaan dhibaatada yar ee wadada cidhiidhi ah ee miyiga dhammaan xadka;
2. Adeegsiga afarta qaybood M ee naqshadeynta guud ee dabacsan, hel guul-darroojin dhakhso leh iyo fur-fur kilkil gacmeed.
3. Nooca XX-ka waxaa lagu naqshadeeyay nidaamka hydraulic otomatiga ah, aag yar oo ay degan yihiin, qaab dhismeedka dhismaha ee ku habboon;
4. Awoodda matoorku waa 60 mitir oo mitir / saacad ah, si madaxbanaan ayaa loo toosin karaa, xorna loo yahay xakamaynta waxtarka dhismaha;
5. Injineer cusub oo cusub, ilaa in kabadan 95% qalabka saqafka, nidaamka xakamaynta dareeraha sare iyo isticmaalka tamarta ayaa hoos udhacay ilaa kan ugu hooseeya si loola kulmo ilaalinta deegaanka.
6. Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa loo isticmaalaa noocyada caanka ah ee caanka ah ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah, heer sare, tayo wanaagsan, heerka fashilka hooseeya, nidaamku waa mid bisil oo deggan, cimri dheer, saamiga sare ee waxqabadka illaa qiimaha.
7. Circuit wuxuu qaataa silsilad iskuxiran oo iskuxiran, qodobo khaldan yar, isku haleyn sare, naqshadeynta is-weydaarsiga mashiinka dabacsan, wuxuu ka dhigayaa hawlgalka mid aad u sahlan; qaladka baarista qaladka, sidaa darteed dayactirka dayactirka, dayactirka ayaa ku haboon.
8. Ku day summadaha caanka ah ee caanka ah 500 ee qasitaanka qasabka ah, kudarta la taaban karo, tayo wanaagsan.
Moodel ： NJ5251THB38 Halbeega Farsamada Moodel ： NJ5251THB38 Halbeega Farsamada
Cabbirrada Mashiinnada dhererka buuxa 10500mm Soo saarista nidaamka cabirka
Cadaadis hooseeya 140m3/ h
Dhererka guud 3850mm cadaadis sareeya 83m3/ h
Dhererka guud 2500mm Cadaadiska bamgareynta fekerka
Cadaadis hooseeya 8MPa
Miisaanka qofka 25000Kg cadaadis sareeya 12 MPa
Moodhiska 'Chassis' Dongfeng Wakhtiyada bamgareynta fekerka Cadaadis hooseeya 39
Qaabka wadista 6 × 4 cadaadis sareeya 23
nooca mashiinka Yuchai Foomka waalka qaybinta S valve
Awoodda soosaarka / xawaaraha 199 / 243Kw / 2100RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 230 / 1550mm
Heerarka Emission Wadan V Barokaca matoorka saliida 190ml / r
Cabbirka taayirrada 11.00R20 Muuqaalka Hopper 0.5m3
Wheelbase 4350 + 1300mm Dhererka quudinta 1450mm
Dhumuc toosan 38m Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman 34.1m Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan 22.8m Isku-darka sibidhka 160-220mm
dherer 7500mm Mugga haanta saliida 500L
dherer 6500mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
dherer 6300mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
dherer 6800mm Summadaha Qalabka wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
Geeska 229o Bamka saliida weyn Jarmalka Rexroth
Gacanta shanaad dherer 7000mm Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
Geeska 212o Bamka cadaadiska joogtada ah Jarmalka Rexroth
Tuhunka tuubbada dherer 3m Bamka matoorka Jarmalka Rexroth
Ballaca hore ee hore 6800mm Miisaan dheelitirka korantada Rexroth Jarmal / HBS
Dib u ballac ballaadhka ballaadhka 8350mm Manifold Eaton ， USA
Masaafada dhererka dheer ee lugaha hore iyo dambe 6800mm Sheet bir ah Waxaa laga keenay Sweden / Baosteel
Lugta hore Nooca X Kontoroolka fog HBC / ohm, iwm.
Hore: 38 mitir taraafikada la taaban karo
Xiga: Gawaarida qaada 42 mitir
30 mitir isku-dhaf ah